‘संक्रमणको जटिल अवस्थामा सानो सहयोगले पनि ठूलो अर्थ राख्छ’ डा. नविन न्यौपाने
अहिलेको संक्रमणको यो जटिल परिस्थितिमा घरबाट निस्कने अवस्था छैन । तर पनि कतिपय विरामीहरु घरमै आउने गर्नुभएको छ । कतिपय विरामीहरु उनीसमक्ष पुग्न नसकेतापनि उनी घरमै पुगेर समेत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यस्ता विरामीहरुलाई नविनले निःशुल्क सेवा समेत
शनिवार, जेठ १, २०७८ विमल थापा
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण दरले उच्च विन्दू समात्दै गर्दा सरकारले देशका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी अत्यावश्यक सेवाहरु सञ्चालन गरिएतापनि कोरोना संक्रमणको दर अझैपनि ओरालो लाग्न सकेको छैन । मानिसहरुलाई अत्यावश्यक नभइ घरबाहिर ननिस्कन प्रशासनले आदेश दिएतापनि त्यसको पूर्ण रुपमा पालना भने हुन सकिरहेको छैन । तर यस्तो अवस्थामा विरामीहरुको सेवामा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भने भ्याइ–नभ्याइ छ । न त उनीहरुलाई आफ्नो घर परिवारको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै छ, न त निजी जीवनको मात्र ख्याल गरेर बस्ने अवस्था छ । अहोरात्र विरामीको सेवामा खटिनुपर्ने अवस्था हरेक जसो स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुमा रहेका बेला भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका अस्पतालमा कार्यरत डा. नविन न्यौपानेलाई पनि अहिले कोरोना संक्रमित विरामीहरुका निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न भ्याइ–नभ्याइ छ ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उक्त अस्पतालमा कोभिड विरामीहरुलाई उपचार गर्ने छुट्टै व्यवस्था त छैन । तर अहिले नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको दर ह्वात्तै बढ्न थालेपछि भने उनीसँग आवश्यक परामर्श लिने विरामीहरुको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ । संक्रमणको यो जटिल परिस्थितिमा हाल उनी टेलिमेडिसिन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘कोरोना संक्रमितहरुको निम्ति प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसकेतापनि संक्रमितहरुको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा मैले जुनसुकै बेला सेवा दिइरहेको छु ।’ हुन त नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितहरुका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श लिनका लागि डा.नविन न्यौपाने र डा.अनन्तकुमार थापालाई जिम्मेवारी नै तोकेको छ । सोही अनुसार नगरपालिकाभित्रका कोरोना संक्रमित विरामीहरुका लागि नविन पनि आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श दिने कार्यमा दिनरात खटिएका छन् । हाल उनी नगरपालिका अस्पतालमा अल्ट्रा साउण्ड तथा एक्स–रे मेसिन जडान कार्यमा डटेर लागेका छन् । अबका केही समयमा नै नगरपालिका अस्पतालले उक्त सेवा प्रदान गर्नेमा उनी ढुक्क छन् ।
अहिले नविनलाई हरेक दिन ७० देखि ८० वटा विरामी तथा आफन्तहरुबाट फोनहरु आउने गर्दछ । उनी यस्तो फोन आउँदा विरामीहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर आवश्यक परामर्श दिने गर्दछन् । आवश्यक परामर्श पश्चात उनी फोनबाटै विरामीको लागि तत्काल दिन सकिने सेवा दिने गर्छन् । कहिलेकाहिँ त राती १/२ बजेपनि फोन आउने गर्छ । तर आफूलाई जुनसुकै बेला आउने यस्ता फोनलाई तुरुन्त रेस्पोन्स गर्छन् । अनि विरामीलाई तत्कालै स्वास्थ्य परामर्श प्रदान गर्दै डाडस दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो पेशा नै यस्तो हो कि विरामीको जस्तोसुकै बेला र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सेवा गर्न सकुँ । मलाई विश्वास गरेर जोसुकैले गरेको यस्तो फोनबाट सानो भएपनि मैले सहयोग गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुशी लाग्ने गर्छ । आखिर अहिलेको अवस्थामा मैले गर्ने पनि त यही नै हो नि ।’
अहिलेको संक्रमणको यो जटिल परिस्थितिमा घरबाट निस्कने अवस्था छैन । तर पनि कतिपय विरामीहरु घरमै आउने गर्नुभएको छ । कतिपय विरामीहरु उनीसमक्ष पुग्न नसकेतापनि उनी घरमै पुगेर समेत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यस्ता विरामीहरुलाई नविनले निःशुल्क सेवा समेत दिँदै आएका छन् । कतिपय विपन्न विरामीहरुका लागि त आवश्यक औषधि समेत निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । संक्रमणको यो संघीन घडीमा कुनैपनि विरामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा जाँच गर्दा जोखिम त उत्तिकै छ । तर पनि आफूले नगरे कसले गर्छ ? भन्ने लाग्ने नविन बताउँछन् ।
हाल उनी विगत ८ महिनादेखि सूर्यविनायक नगरपालिकाको अस्पतालमा कार्यरत छन् । त्यसो त सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ब्रदर्श हेल्थ केयर तथा डाइग्नोष्टिक सेन्टरमा समेत आंशिक रुपमा कार्यरत नविनले संक्रमणको जटिल परिस्थितिमा ध्यान दिएर एक बर्षसम्म निःशुल्क ओपिडी सेवा प्रदान गर्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन् ।
नविन भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ४ का स्थायी बासिन्दा हुन् । उनी स्थानीय भएकाले पनि आफ्नो नगरपालिकाका जुनसुकै विरामीको सेवा गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व लाग्ने गरेको बताउँछन् । अझ यो संक्रमणको अवस्थामा त सानो मात्र चिकित्सकीय सहयोग गर्न सकिएपनि त्यसले ठूलो अर्थ लाग्ने उनी ठान्छन् ।
पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणको दर सबैतिर बढेकाले सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा उनी सचेत गराउँछन् । नविन भन्छन्, ‘हामीले सानो मात्र ध्यान दिन सकेनौ भने पनि भोलि गम्भीर समस्या भोग्नु पर्ने हुन सक्दछ । अहिलेको अवस्था भनेको सबैजना संवेदनशील भएर आफू पनि बच्ने र अरुलाई पनि बचाउने नै हो ।’
प्रकाशित मिति: शनिवार, जेठ १, २०७८, ०४:३०:२१